Izisuli ezomileyo (Canister)
(Sinesatifikethi se-EPA kuphela kumzi-mveliso wethu, hayi kwiimveliso ze-EPA)
(Singabonelela ngokosula okomileyo, emva koko ulwelo luyi-filt kwisitya esiya kuso)
Ukuqinisekisa umgangatho osulungekileyo wokusula kunye nebhokisi
Ukusula iintsholongwane kumphezulu womhlaba
(Sinesatifikethi se-EPA kuphela kumzi-mveliso wethu, hayi kwiimveliso ze-EPA）
Ukucoca iintsholongwane isusa i-99.9% yeentsholongwane kunye neBacteria by Amaxesha ama-3 yomelele ngokuchasene netawuli yephepha:
Coca ngakumbi, sebenzisa ngaphantsi
UJuan Juan izithambiso zokucoca ubuso unomdla wokuba ngumzi mveliso we-OEM weemveliso ezidumileyo kwihlabathi kushishino lwezithambiso. Ndiyazi kakuhle ukuba ukusula izithambiso yeyona nto iphambili kubathengi bayo yonke iminyaka kunye nohlobo lolusu. Njengemarike enomceli mngeni kwaye eguqukayo rhoqo, siyazingca ngokuba siphuhlise umgangatho wokusula izithambiso ngokusekwe kubathengi kunye neetekhnoloji ezintsha.
Sisoloko sizama ukuphucula imveliso ukuqinisekisa ukuba iinqununu zethu ze-oem zigcinwa ngaphambi komdlalo.
Ngaphezulu kweminyaka eli-10, uJuan Juan ngamaqabane e-oem kwihlabathi liphela leempawu zokusula indlu ukucoca, ukupholisha kunye nokubulala iintsholongwane kwizigidi zamakhaya.
Iinqununu zethu ezidumileyo zinetalente kwaye zinobuchule kwimisebenzi yasekhaya ukuze izisombululo ezifanelekileyo zibonelelwe kubantu abanomdla wokucoca nokukhathalela amakhaya abo. Kanye xa kucocwa ngokucocekileyo ngeveki kufakwa endaweni yokucoca ngokukhawuleza nangokuphindaphindiweyo xa kusetyenziswa izinto zokusula zekhaya yonke imihla. Njengemveliso ekhokelela kwimarike, amaKhaya azisula ngeziqholo ezahlukileyo kunye nevumba elilinganiselweyo yingqondo entsha kunye nomgangatho.
I-Microfiber (okanye i-microfibre) i-synthetic fiber egqibeleleyo kunokuba enye i-denier okanye i-decitex / intambo, enobubanzi obungaphantsi kwe-micrometres ezilishumi. Umtya wesilika umalunga nesikhanyeli esinye kwaye malunga nesihlanu sedayara yoboya bomntu.
UKUQONDA NGOKUZALEKA OKUKHULU, IINJA ZENKQUBO, OKANYE IXESHA ELANDISIWEYO -Iipads zoqeqesho lwekhabhoni ezinobungakanani obukhulu zilungele iintlobo ezinkulu okanye izinja ezininzi, ezigubungela indawo enkulu kuneepads zepuppy.
IITABHU ZEKHONA ZOKUSETYENZISA ZITHINTELA UKUTHIPHA- Akukho sidingo sokukhathazeka malunga neepads zenjana ezityibilika kunye nokutyibilika kuwo wonke umgangatho; iithebhu zekona zokubambelela zigcina ezi pads zenjana endaweni yazo
Umboniso weplastiki ovuzayo kunye nokutshixa kukhusela umgangatho nekhaphethi.